၂၀၁၂ နိုင်ငံရေးကို ပြန်သုံးသပ်မိခြင်း | ဧရာဝတီ
လင်းသန့်| December 29, 2012 | Hits:6,305
11 | | ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘားရက် အိုဘားမားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်က သမိုင်းဝင်ပါ။ (ဓာတ်ပုံ- White House)
၂၀၁၂ ကို စတင် ချည်းနင်း ၀င်ရောက်လာတာနဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အားလုံးပါဝင်ခွင့် ပြုနိုင်ရေး အတွက် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကို ကြီး အစရှိတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတချို့ကို ပြန်လွှတ် ပေးလိုက်ပြီး နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွေအတွက် ပြန်လည် အစ ပျိုးထိတွေ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိလာခဲ့တယ်။
ကြိုးတိုက် ဋီကာ အပိုင်း (၁၆)
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment pps၁၂၃၄၅ December 29, 2012 - 10:06 pm	၁။ရွေးကောက်ပွဲ ကတော့ တရုတ် ပုံစံကို အတုခိုးပြီး လုပ်တာပါ။ ကိုသန်းရွှေ အမိန့်ပေးလို့ ဖြစ်မှာပါ။ တရုတ်ပြည်မှာလိ အဓိက ကွန်မြူနစ်ပါတီက အဓိက နေရာယူထားပြီး အခြားပါတီ7ခုက နေရာနည်းနည်းရပြီးပါလီမန်မှာ စတိပါဝင် လို့ရအောင်(ဘောင်ဝင်အောင်) လုပ်တာပါ။ တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း ဒီစနစ်ကို ဒီမိုကရေစီ ခေါ်တာပဲ။ မော်စီတုံးလက်ထက်မှာ ဒုသမ္မတ တစ်ယောက် ကို ကွန်မြူနစ်ပါတီ မဟုတ်တဲ့ အခြားပါတီက ခန့်အပ်ခဲ့သော်လည်း နောက်လာ တရုတ်ခေါင်းဆောင်များသည် အခြားပါတီ ခေါင်းဆောင်များကို ဝန်ကြီးရာထူးသာ ပေးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
၂။မော်စီတုံး လက်ထက်မှာလည်း ဆိုဗီယက် နှင့် ကွဲအောင်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အမေရိကန်ု နှင့် နစ်ဆင်လက်ထက်မှာ ဆက်ဆံရေးထူ ထောင်ခဲ့တာပဲလေ။ အခုတော့ တရုတ်တွေ ဝဋ်လည်ပြီပေါ့။
၃။တရုတ်ပြည် တိဘက်မှာ ပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီး တရုတ် အစိုးရ က ရဲတွေသုံးနေပေမယ့် မြန်မာပြည် ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ စစ်တပ်က တိုက်လေယာဉ် တို့ အမြှောက်တို့နဲ့ ပြဿနာ ရှာ နေတဲ့ သူတွေကို တိုက်ခိုက် နေရဆဲပါ။
၄။တရုတ်ပြည် မှာ မြေပြဿနာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ပြဿနာတွေ အတွက် ပြည်သူလူထု က နေ့တိုင်း ဆန္ဒပြနေကာ အစိုးရမှ လည်း ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း ပေးနေသလို မြန်မာပြည် မှာ လည်း အခုတော့ တိုးတက်နေပါပြီ။ တရုတ်အစိုးရ လိုပြည်သူနှင့် တပူးတည်း မနေနိုင်တာကလွဲလို့။
၅။တရုတ်ပြည်မှာ ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို တိုက်ရိုက် အမည်ဖေါ်ထုတ် တိုက်ခိုက်ရင်တော့ ဖမ်းတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ။
၆။တရုတ်ပြည်မှာ အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကို လာဘ် မစားဖို့ သမ္မတ ကပြောနေပေမယ့် ဆင်းရဲခြင် ယောင်ဆောင်သော မီဒီယာ သမားများကြိုက်သော ဝန်ကြီးချုပ်က တော်တော်ချမ်းသာနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း မီဒီယာ သမားများကြိုက်သော သမ္မတရုံးဝန်ကြီး များက ဆင်းရဲခြင်ယောင် ဆောင်နေသော်လည်း အစိုးရ တိတ်တိတ်ပုံး လုပ်ငန်းများကို တင်ဒါမခေါ်ပဲ ကိုယ်ပိုင် တပည့် သစ်များကို ရောင်းစားနေပါတယ်။
၇။တရုတ်ပြည်နှင့် မတူတာက မြန်မာပြည်မှာက နံမည်ပျက်ရှိသူတွေကို သမ္မတ ကလူမြင်ကွင်းမှာ ပေါင်းတာပါ။ ဒါကိုပွင့်လင်အစိုးရ လို့ စစ်သားသားသမီး မီဒီယာ တွေကပြောပါတယ်။
ဒါတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှ အရေးယူနိုင်မှ တိုင်းပြည်ကောင်းစားမှာပါ။ သို့မဟုတ်ရင်တော့……..
Reply	ချင့်ယုံ December 30, 2012 - 9:45 pm	ပြည်တွင်းစစ်မှာလေယာဉ်သုံးတယ်ဆိုပြီးဖွနေကြတယ်။ KIA သူ့အခြေအနေမကောင်းမှာတွေ့လာလို့ အော်လာတာကို သံယောင်လိုက်နေကြတယ်။ပြည်တွင်းစစ်မသုံးရလို့ဥပဒေမရှိပါ။ KIA က သူ့ဖက်မှာစစ်ရေးအရေးသာမှု ရှိတယ်ယူဆလို့ နိုင်ငံရေးမရှင်းပဲအပစ်အခတ်မရပ်စဲနိုင်ပါလို့အော်နေတာပါ။ ခုလိုအခြေအနေမှာ ထိထိရောက်ရောက်လုပ်တဲ့ အခါကျတော့မတရားလုပ်နေပါတယ်လို့ ၀ါဒဖြန့်လာတာပေါ့။ သူ့ဖက်ကစစ်ရေးအရေးမသာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလာမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုတာဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါဆိုကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ဘေးဒဏ်မခံရတော့မှာပေါ့။ KIA လက်မထောင်နေသရွေ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သူတို့ကိုဦးနှိမ်နိုင်မှ ခင်ဗျားတို့အော်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမြင်လာရမှာပါ။တပ်ကတစ်ဖက်သတ်လုပ်ချင်လို့မဟုတ်ပဲ ဆွေးနွေးပွဲကိုအောင်မြင်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဆောင်ရွက်နေတာပါ။
Reply	မြန်မာပြည်သား December 31, 2012 - 12:46 pm	ရခိုင် ကိစ္စမှာ သွေး ထိုးသူတွေရှိပါတယ်။ သခင်အောင်ဆန်းကို ကြည့်မရတဲ့ ရခိုင်တွေရဲ့မျိုးဆက်တွေနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ထိပ်တန်း အရာရှိတွေပါ။
လက်ပံတန်းတောင် မှာ အမိန့်ပေးခဲ့ တဲ့ သူ ကတော့ အစိုးရ အဖွဲ့အကြီးအကဲပါ။
လက်ရှိ အစိုးရ လက်ထက်မှာ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာကို အဘုန်း ဆုံးလူ က သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး MIC ဥက္ကဌပါ။ ထို ဥက္ကဌကြီးမှာ စီမံကိန်း တွေကို လက်သိပ်ထိုး ရောင်းစား တတ်သူ။ တရုတ်ပြည်မှ ကား များကို ဈေးကြီပေး ဝယ်တတ်သူ၊ LED စက်ရုံခေါ် ပြည်ပ နိုင်ငံများတွင် ဒေါ်လာ သောင်းဂဏန်း တန်သော စက်ရုံကို ဒေါ်လာ ၃ သိန်း ပေးဝယ်သူ၊ မြင်းခြံစီမံကိန်း များ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ၄ဆ အမြတ် တင်ခိုင်းသူ နှင့် စာနယ်ဇင်း တွေပါ ဂွင်တွေ ဖန်တီးပေး တတ်သူပါ။
၂၀၁၂ မှာ အမှားဆုံး စာလုံး မှာ နောက်ပြန်ဆွဲနေသူတွေကို ချန်ထားခဲ့မည် ဆိုသော အစိုးရ ၏ စကား ဖြစ်ပါသည်။
Reply	မြန်မာပြည်သား December 31, 2012 - 1:10 pm	တိုင်းပြည် ကို အကောင်း ဖက် ကို ရောက်စေချင် တယ်ဆိုရင် တော့ MIC ဥက္ကဌကြီး ကို သာ ဖြုတ် လိုက်ပါတော့ဗျာ။ တရုတ်ပြည်မှာ တော်တော် ဈေးပေါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရင်းနှီးတဲ့ သူတွေကို ဂွင်ဖန်ပေးပြီး တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ခန့်မှန်းခြေ သိန်း ၄၀၀လောက် ရိုက်ထုတ်သွားတာ ။ ဒီလိုလူမျိုးမှ မရိုက်ထုတ်ဖူး ဆိုရင်တော့ သမ္မတ လည်း clean goernment လို့ပြော မနေပါနဲ့တော့ ကွာ။
Reply	R ZAr January 1, 2013 - 8:49 pm	သမ္မတကြီး ရေ အားလုံး သာ ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့။ သမ္မကြီး လူတွေက အားလုံး လူလိမ်တွေပဲ။